avril 2021 – Page 73 – Midi Madagasikara
Miandrivazo : Takalonaina enina avotra, jiolahy iray voasambotra
Nifanome tanàna ireo teo anivon’ny zandarimariam-pirenena sy ny teo anivon’ny Tafika avy ao amin’ny ZRPS Bravo sy ny Holafy faha-511, tamin’ny fanavotana ireo olona lasan’ny jiolahy natao takalonaina tany amin’ny distrikan’i Miandrivazo iny ny herinandro lasa teo. Avotra soa aman-tsara izy enina mianadahy ary nisy iray tamin’ireo olon-dratsy no voasambotra, araka ny fampitam-baovao azo. Marihana…
Fanendahana eto Tanà : Miparitaka loatra ny sabatra
Izay mpanendaka voasambotra dia saika niaraka tamin’ny sabatra avokoa teto an-drenivohitra. Vao omaly no nahasarona telo lahy tamin’ny toerana roa samihafa indray ny polisy. « Teo am-panendahana olona niaraka amin’ny antsibe, teny amin’ny faritra CENAM-67ha, ny roa lahy no tratran’ny polisy nanao fanamiana sivily izay efa nialokaloka teny an-toerana ary efa vonona hisambotra avy hatrany », raha…
Fifoterana : Raim-pianakaviana tratra nanolana ny zanany vavy imbetsaka
Efa tsy mifadi-trovana tanteraka ! Tsy vao sambany, araka ny fampitam-baovao azo avy amin’ny pôlisim-pirenena no nanamparan’ity ray adala ny filàny ara-nofo tamin’ny zazavavy kely vao sivy taona monja, izay zanany naterany fa efa maromaro ihany. Voasambotra tany Tolagnaro moa ingahirainy, ny alatsinainy lasa teo ary hatolotra ny Fampanoavana anio. Raha ny vaovao voaray dia nitranga…